हाम्रा हिरो हिरोइनले जेसिका अल्बाबाट सिक्नुपर्ने पाठ | साहित्यपोस्ट
अच्युत कोइराला प्रकाशित २ आश्विन २०७८ १४:०१
हालै हाम्री अभिनेत्री श्वेता खड्काले निर्माण व्यवसायमा कदम चालिरहेको र त्यसका लागि सबै शुभेच्छुकहरूको शुभकामना चाहिएको टिप्पणी फेसबुकमा पढ्न पाइयो । त्यस्तै करिश्मा मानन्धरले व्यवसायमा चालेको कदम र त्यसका लागि छोरी कविताले सघाएको विषयमा पनि पढ्न पाइयो । नेपाली कलाकारको व्यवसायमैत्री चाह र गतिविधि जति प्रशंसालायक छ, त्यति नै धुर्मुस सुन्तलीजस्तो महत्त्वाकांक्षाप्रति उति नै सचेत हुनुपर्ने पाठ पनि पढाएको छ ।
आफ्नो ब्रान्डिङप्रति कति सचेत हुनुपर्छ, एउटा व्यवसायी वा कलाकारले, त्यो कुरा केही समयअघि हलिउड अभिनेत्री जेसिका अल्बाको अनुभवले पनि सिकाउन सक्छ । व्यवसायीमैत्री हाम्रा हिरो हिरोइनले जेसिका अल्बाबाट के सिक्न सक्छन् भन्ने एउटा सानो टिप्पणी यहाँ गर्न सकिन्छ ।
केही साताअघि हलिउडकी अभिनेत्री जेसिका अल्बाले उनको कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्षबाट बिदा लिएकी छन् ।
त्यो बिदा उनले यस्तो बेलामा लिएकी छन्, जब उनी आफैँले स्थापना गरेको कम्पनीले नक्कली सामग्री उत्पादन गरेको, ग्राहकलाई ठगेको आरोप लागेको थियो । त्यो दाग मेट्न उनले निकै ठूलो पापड बेल्नु परेको थियो । दाग मेटिएपछि उनले आफ्नो भूमिका कम गर्न अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिएकी हुन् ।
जस्तो कि, धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ- हलिउडमा चल्तीका नायक-नायिकाहरूले कुनै कम्पनी स्थापना गर्न सजिलो छ । उनीहरूले अनुहार बेचे पुग्छ । तर अरू नायकनायिकाभन्दा जेसिका अल्बा अलि फरक छिन् । उनले अनुहार होइन, अरू नै बेच्न चाहिन् । प्रायःले कपडा पसल खोल्छन्, डिजाइन कम्पनी खोल्छन्, उनले भने अनेस्ट नामक अर्ग्यानिक ब्युटी केयर तथा बेबी केयर ब्रान्ड बनाएकी थिइन् ।
हेर्दाहेर्दै यो कम्पनी दुई बिलियन डलरको कम्पनी बनिसकेको छ । यो कम्पनी उनले २०११ मा स्थापना गरेकी थिइन् । उनले स्थापना गर्दा एउटा कथा बेचेकी थिइन् र त्यो कथा सर्वसाधारणले निकै रूचाए र उनलाई एकै झमटमा बिलियन डलर कम्पनी संस्थापक बनाइदिए ।
तर सन् २०१५ र २०१६ मा कम्पनी विवादमा आयो । अनेस्टले विभिन्न मुद्दा झेल्नु पर्यो । उनको कम्पनीले प्राकृतिक चिज बेचेको भने पनि कतिपय सामग्रीहरू विषाक्त रहेको र बालबालिकाका लागि बनाइएको तेलमा हानिकारक तत्त्व रहेको पाइएकाले उनको कम्पनीलाई मुद्दा परेको थियो ।
यो समस्यालाई उनले अदालतबाहिर नै सेटल गराइन् ।
त्यसो त कुनै कम्पनी विवादमा पर्यो भने त्यसलाई निप्टाउने काम कम्पनीको हुन्छ, कुनै एक व्यक्तिको होइन तर कम्पनीको अनुहार जेसिका अल्बा भएकीले उनले यो मुद्दालाई राम्ररी नै सल्टाउने विचार गरिन् । र, सल्ट्याइन् नै ।
जब यो कम्पनीलाई शेयर बजारमा पुर्याइयो, कम्पनीको मूल्य अर्बमा पुग्यो । कम्पनीमा उनको सेयर ६.१ प्रतिशत छ । यस हिसाबले कम्पनीमा उनको मूल्य एक सय ३० करोड डलरको बन्यो ।
गएको महिना ४० नाघेकी जेसिकाको कम्पनी स्थापनाकालदेखि नै यसलाई सुरक्षित प्रडक्ट उत्पादक कम्पनीका रूपमा उभ्याउने थियो । यसअघि कतिपय विषाक्त बेबी आयल र अन्य ब्युटी प्रडक्टविरूद्ध जेहाद छेडेकी उनले अमेरिकी कंग्रेसमा भाषणसमेत गर्न भ्याइन् । उनले नयाँ नीति बनाइनुपर्ने, विषाक्त बेबी आयल र ब्युटी प्रडक्ट बेच्न बन्द गरिनुपर्ने आवाज बुलन्द गरेकी थिइन् ।
केही साथीले उनलाई उक्साए, तँ यस्ता मुद्दाको विरोध गर्दै मात्र हिँड्ने कि तैँले चाहेजस्तो प्रडक्ट नै उत्पादन गर्ने ?
उनले चाहेजस्तो प्रडक्ट उत्पादन गर्न सानोतिनो रकमले पुग्दैनथ्यो । उनले फिल्मबाट राम्रै पैसा कमाइरहेकी त थिइन् तर एउटा कम्पनी नै चलाउन त्यो पर्याप्त थिएन । फेरि कम्पनी चलाउने अनुभव नभएका कारण त्यसलाई दीर्घजीवन दिनु पनि त पर्यो !
१२ पुष २०७७ १०:००
त्यसका लागि ठूलो लगानीकर्ता उनलाई चाहिन्थ्यो । उनी यसपछि निस्किन्, आफूले चाहेजस्तो प्रडक्ट उत्पादन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न पैसाको खोजी गर्न ।
त्यो बेला उनी गर्भवती थिइन् । उनको एक कलमा उनको क्यालिफोर्नियास्थित घरमा एक से एक लगानीकर्ता उपस्थित हुन सक्थे । तर उनले सजिलो बाटो रोजिनन् । उनी पुक्क उठेको भुँडी बोकेर ठूला लगानीकर्ताहरूको अफिस अफिस चहारिन् । धेरैले उनलाई भेट गरे, केहीले चासो दिए तर दुई जनाले मात्र लगानी गरे ।
लगानी पाएर मात्र हुने थिएन, कस्ता केमिकलले बालबालिकालाई हानि गर्छ र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न कस्ता चिज आवश्यक पर्छ भन्ने बुझ्न बालविशेषज्ञलाई समेत उनले भेटिन् । भेटेकामध्ये एक फिलिप ल्यान्ड्रिगन त उनको प्रशंसक नै भए । ‘उनी हिरोनी भएका कारण म प्रशंसक भएको होइन, विषयवस्तुप्रति उनको गम्भीरताका कारण उनलाई मैले मान्न थालेको हुँ,’ उनले एक टिप्पणीमा भनेका छन्, ‘मैले धेरै हिरोनी भेटेको छु, तिनका सन्तानको उपचार पनि गरेको छु तर विषयवस्तुको गुदी बुझ्ने उनको लालसा र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता र अध्ययन उनमा मैले पाएको छु । ठूलो कुरा चाहिँ, उनी सतही मानिस हैनन् ।’
उनका मातापिता मेक्सिकोका मूलबासी भए पनि उनी क्यालिफोर्नियामै जन्मिएर हुर्किन् । उनका बुवा अमेरिकी सेनामा काम गर्थे ।
कडा परिश्रम र अनुशासन आफ्नो परिवारबाट सिकेको बताउने जेसिकाले १२ वर्षकै उमेरदेखि अभिनय गर्न थालेकी थिइन् । सन् २००३ मा रिलिज भएको ‘हनी’ फिल्मबाट उनले पर्याप्त चर्चा कमाइन् । त्यसपछि उनले पछि फर्केर हेरिनन् । उनले त्यसपछि ३० फिल्ममा अभिनय गरिन् र ती फिल्मको कुल कमाई २ बिलियन डलर थियो ।
हलिउडमा काम गर्न हजार वटा अस्वीकार झेल्नु पर्थ्यो, त्यो झेलेर उनी सफल अभिनेत्री भएकी थिइन् । व्यवसायी बन्न पनि त्यस्तै झेल्नुपर्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो तर उनी त्यसका लागि पनि तयार भइन् ।
उनको शुरूवाती लगानीकर्ता कम्पनी आइभिपीका एरिक लियावले एक ठाउँ भनेका छन्, ‘भ्यात्त भुँडी लिएर जब कुनै अभिनेत्री लगानीकर्ता खोज्न निस्कन्छे भने त्यसलाई तपाईंले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । मैले पनि उनको दूरदृष्टि र सोच सुनेपछि उनलाई मान्न बाध्य भएँ कि वास्तवमा उनी अन्य हिरोइनजस्तो अनुहार बेच्न चाहने व्यवसायी पक्कै होइनन् ।’
जब उनको कम्पनी विवादमा आयो, जेसिकाले कुनै प्रवक्ता नियुक्त गरिनन् । उनले लगानीकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै एउटा सम्मेलन डाकिन् । कम्पनीले चाहिँदोभन्दा चाँडो प्रगति गर्न खोज्दा स्तरमा सम्झौता हुन पुगेको र अब त्यस्तो हुन नदिन आफू निर्मम हुने बताएकी थिइन् ।
उनको कम्पनी त्यो विवादपछि अझै नाफामा जान सकेको छैन । कम्पनीले आफ्ना उत्पादनलाई पुनः नयाँ फर्मुला प्रयोग गरी बजारमा ल्याउँदा निकै नै खर्च गरेको छ ।
उनले हालै कम्पनीको अध्यक्षबाट राजिनामा दिइन् तर कम्पनीको चिफ क्रिएटिभ अफिसरका रूपमा काम गरिरहने छिन् । यसको मूल कारण चाहिँ आफ्ना सन्तानलाई समय दिन नभ्याएको बताउँदै आएकी छन् ।
जेसिका अल्बाले फिल्मबाहेक आफ्नो जज्बा, चाह, प्यासन भएको क्षेत्रमा काम गरेर सारा तनाव झेलिन् र त्यसलाई सफलताको बाटोसम्म पुर्याइन् । अब कम्पनीले राजमार्ग आफैँ बनाउन सक्ने आकलनका साथ कम्पनीमा आफ्नो भूमिका कम गरेको बताउने गरेकी छन् ।
के यो जानकारी हाम्रा कलाकारका लागि प्रेरणादायी बन्न सक्ला ?
२ आश्विन २०७८ १४:०१
करिश्मा मानन्धरजेसिका अल्बाश्वेता खड्का